Soavaly amerikana: ny karazany lehibe niavian'i Amerika | Soavaly Noti
Jenny monge | | Fanafihana na fiaretana, Karazan-tsoavaly
Alohan'ny hiresahana momba ny karazana soavaly amerikana, andao haka kapoka fohy vitsivitsy momba ny tantaran'ny soihazy any Amerika. Fantatra fa amin'ny ny prehistory, nandritra ny Pleistocene dia nisy soavaly teratany saika manerana an'i Amerika, ary ny faritany mifanandrify amin'ny faritra Pampean dia manankarena manokana amin'ireo biby ireo.
Saingy ny fahatongavan'olombelona mihoatra ny 11.000 taona lasa izay dia toa iray amin'ireo antony manaparitaka ny fongana Equine Amerikanina tera-tany. Mbola ho ela taty aoriana, mandritra ny fandresena an'i Amerika, rahoviana ny Espaniola mpandresy dia namerina namerina an'io biby kanto io izay niely nanerana ny kaontinanta tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Tsikelikely dia nisy soavaly avy any amin'ny firenen-kafa toa an'i Angletera na Frantsa, tonga tany Amerika ary, jMiaraka amin'ireo equines espaniola izay efa mipetraka amin'ny tanin'ny amerikanina, dia niforona karazana vaovao; Karazan-tsoavaly amerikana.
1 Drafitra fanosotra amerikana
3 Soavaly volom-borona
4 Soavaly Creole
5 Soavaly Banks ivelany
6 Soavaly Paso Peroviana
7 Quarter Mile
11 Pinto Amerikanina
12 Polo Arzantina
13 Soavaly an-tendrombohitra be vato
14 American saddlebred
15 Seza Arzantina
16 Tennessee mandeha
Ny American Cream Draft, dia ny ny karazana soavaly volavolan-tsoavaly mandroso any Etazonia misy ankehitriny. Izy io dia ekena amin'ny toetrany volom-borona misy loko krema na champagne volamena, ary ho an'izay maso amber.
Miaraka amin'ny fanodinana ny asa tany, dia nihena be ny santionany amin'ity karazana ity nandritra ny am-polony taona vitsivitsy talohan'ny 1982, rehefa tsapa fa mety ho very ny karazany. Nanomboka teo dia nitombo izy io ny isan'ny voasoratra anarana American Cream Draft dia mitovy (ny firaketana an-tsokosoko dia noforonina tamin'ny 1944), na izany aza mbola isa ambany io.
Heverina ho iray amin'ireo soavaly tsara indrindra eran-tany amin'ny dia lavitra, dia miavaka amin'ny azy io volony mitokana, Manana faritra maizim-pito mifangaro amin'ny hoditra mavokely izy ary miteraka hoditra mitroka.
Raha ny fikarohana arkeolojika dia voalaza fa izany ny karazany dia avy amin'ny kaontinanta aziatika ary nampahafantarin'ny Espaniola tany Amerika nanomboka tamin'ny 1519 tany ho any.
Anarana Ny "Appaloosa" dia avy amin'ny reniranon'i Palouse, que namakivaky ny tanin'ny Indiana Nez Perce. Ireo teratany ireo no nahita ny toetra amam-panahy, ny andriana, ny tanjaka ary ny fahaizan'ny be sandry amin'ireny equines ireny miaraka amin'ny palitao maotina toy izany. Io no soavaly tsara indrindra ho an'ny hetsika Nez Perce, toy ny fihazana na ady, ary noho izany antony izany dia nanomboka niteraka sy namolaka azy ireo izy ireo.
Avy amin'ny hazo fijaliana eo anelanelan'ny soavaly Appaloosa sy ny soavaly Arabo, dia mipoitra ny AraAppaloosa. about Ny fanoherana avo lenta dia tena mety amin'ny soavaly omby, amin'ny fifaninanana an-dalambe sy ny fanafihana.
Miaraka amin'ny haavony izay eo anelanelan'ny 142 sm sy 152 cm, dia manana io karazany avy amin'ny Appaloosa io ny endrika voadio sy ny toeran'ny Arabo, misy loha kely, rambo avo ary fihetsika mahafinaritra, fa ho fanampin'izay dia manana ny palitao hita maso an'ny Appaloosa izy. AraAppaloosa maivana sy voadio kokoa noho ny Appaloosa bebe kokoa amin'ny karazana Quarter Horse.
Ny soavaly Buckskin dia a Karazana amerikana izay itomboany amin'izao fotoana izao any amin'izay heverina ho toerana niaviany: California. Izy io dia karazam-bolo mahery, mahery ary mahatohitra, tena mety amin'ny asan'ny koboy.
Izy ireo dia mitovy amin'ny haavony eo anelanelan'ny 145 cm sy 155 cm, ny vatana matevina sy mahay mandanjalanja, misy endrika boribory. Manana rantsana fohy sy manify izy, na dia mahatohitra be aza.
Ny volon'izy ireo dia mazàna miloko mavo sy mena, lasa ny palitaon'ny lohany dia marevaka. Ny mampiavaka ny Buckskin dia izy ireo ny rambony sy ny mainty, ihany koa Tsipika, tsara ihany, mainty koa dia mihazakazaka avy any aoriana mankany amin'ny rambony.
Ny soavaly kreôla dia a karazana Equine mampiavaka ny South Cone fa niely nanerana an'i Amerika, na dia samy hafa aza ny fivoarany tany amin'ny firenena tsirairay amin'ny kaontinanta. Isan-taona dia betsaka kokoa ireo manangona azy io, izy ireo dia mampiasa azy io amin'ny asa sarotra any an-tsaha sy amin'ny fotoam-pialan-tsasatr'izy ireo.
Ny foko atsimon'i Silia sy ny faritra cordilleran dia nankany amin'ny lemaka atsinanana nahasarika ny soavaly dia izay nonina teo aminy, ary nanomboka nitondra azy ireo tany amin'ny taniny mba hiompy azy ireo tamin'ny fombany manokana. Ireo fitoviana ireo dia nivoatra nifanaraka tamin'ny tontolo iainana onenan'izy ireo ary niampita niaraka tamin'ny karazany hafa mandra-pahitany ilay soavaly kreôla ankehitriny. Izy ireo dia biby mandehandeha, manana tanjaka lehibe sy hozatra izay afaka manana karazana palitao.
Saika ho very ny karazana soavaly kreole ny firoboroboany dia natao ambanin-javatra tamin'ny fahatongavan'ireo fiaramanidina vaovao, fampiasana vaovao, sns. Fa ao Tamin'ny 1910, noforonina tao Shily ny seksiona mpiompy soavaly chiliana, ary natomboka ny fanarenana eo ambanin'ny firaketana ny soavaly kreôla tany am-boalohany.
Soavaly Banks ivelany
Ny soavaly Outer Banks dia karazany iray soavaly soavaly de mipetraka amin'ny nosy Outer Banks any North Carolina. Ny omby dia hita ao amin'ny Ocracoke Island, Shackleford Banks, Currituck Banks, ary Rachel Carson Estuarine Sanctuary.
Taranaky soavaly espaniola, io dia karazana soavaly izay mety ho lasa bibidia taorian'ny sambo sambo tafavoaka velona na nilaozana na nandositra ny sasany tamin'ireo dia notarihin'i Lucas Vázquez de Ayllon na Sir Richard Grenville.
Soavaly izy ireo kely, matanjaka ary mahomby amin'ny toetrany de Nizatra tamin'ny fiainana any amin'ireo nosy izy ireo ary nilomano teo amin'izy ireo mba hitady rano madio sy ahitra madio.
Soavaly Paso Peroviana
Ny soavaly Paso Peroviana dia a firazanana, araka ny tondroin'ilay anarana, avy any Peroa. Volo izany fantatra nandritra ny taonjato efatra mahery ary efa nihalehibe tany amin'ny firenena hafa any Amerika atsimo toa an'i Colombia na Puerto Rico, ary koa any Etazonia izy.
Miaraka amin'ny haavo manodidina ny 145 cm, miatrika a isika Soavaly salantsalany na kely haleha, miaraka amin'ny vatana matevina, malalaka ary tena hozatra. Ny rantsam-batany, na dia fohy aza, dia matanjaka tokoa. Ny vozony, mifanaraka tsara amin'ny sisa amin'ny vatana, dia miafara amin'ny loha malalaka sy fisaka izay manana maso maneho hevitra be.
Na dia hitantsika aza ny ankamaroan'ny karazana sosona, ny lokon'ny chestnut sy ny chestnut dia manjaka amin'ny volony.
El Soavaly ampahefatra na soavaly Quarter, karazana soavaly io avy any Etazonia indrindra mety ho an'ny hazakazaka fohy, indrindra ireo 402 metatra miala ny toerana ahazoana ny anarany. Voalaza fa ny soavalin'ireo koboy sy tantsaha ireo no velona sy maty mitaingina soavaly. Mpitaingina soavalalahy miavaka amin'ny soavaly omby ary amin'ny karazana fifaninanana sy fampirantiana mifandraika amin'ny rodeos.
Izy io dia karazana soavaly manana biby voasoratra anarana betsaka indrindra manerantany, mihoatra ny 4 tapitrisa, izany dia mahatonga azy io ho iray amin'ireo karazan-java-maniry Equine malaza indrindra.
Ny Quarters amin'izao fotoana izao dia fohy (eo anelanelan'ny 143 cm sy 160 cm) sy mahery, miaraka amin'ny fananganana hozatra ary tratra lehibe sy malalaka. Manana iray izy ireo fanatanjahan-tena sy fahaiza-miasa lehibe, nalaza noho ny fanombohany haingana, ny fahaizany mifandimby sy mijanona, ny hafainganan'izy ireo amin'ny halavirana lavitra, ny faharanitan-tsainy ary ny fitondran-tenany tsara.
Ny karazany Morgan dia iray amin'ireo karazana Equine voalohany namboarina tany Etazonia. Noho izany, dia nisy fiantraikany tamin'ny maro tamin'ireo firazanana ao amin'ny firenena, toy ny soavaly Quarter, Tennessee Walking Horse na soavaly Standardbred. Inona koa, naondrana tany amin'ny firenena maro nandritra ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX. Na any Etazonia, toy ny any Eoropa sy Oseania, dia nampitomboina sy novolavolaina ity karazany ity. Tamin'ny 2005, soavaly Morgan maherin'ny 175.000 no tombanana erak'izao tontolo izao.
Ny karazany Morgan dia mahazatra ny fanjakan'i Vermont sy Massachusetts. Momba ny equines matevina ary voadio miaraka amin'ny volom-borona, mahazatra, mainty na volontany, na dia afaka mampiseho sosona samihafa aza izy ireo, ao anatin'izany ny pinta. Tena izy ireo fantatra amin'ny fahaizany lehibe sy ampiasaina amin'ny fifehezana isan-karazany. Izy ireo koa dia soavaly soavaly nandritra ny ady an-trano amerikana.
Araka ny efa hitantsika tamin'ny Appaloosa, rehefa miampita an'i Morgan miaraka amin'ilay soavaly arabo dia misy Equine vaovao mipoitra ny Morab. Miaraka amin'ny tanjona hamoronana karazan-tsoavaly maivana izay afaka manao asa fiompiana koa dia nanomboka niampita ireo karazany roa ireo izy ireo. Nanomboka tamin'ny 1880. Tamin'ny 1973 vao nosoratana ny soavaly Morab voalohany, talohan'ity daty ity dia voasoratra tao amin'ny rejistra Morgan izy ireo.
Mampifangaro ny hakantony sy ny hery, ny Morab ankehitriny dia tena mety amin'ny fifaninanana fampirantiana mba hanintona azy. Ho fanampin'izay, ho azy Toetra tsara dia Equine tsara ho an'ny mitaingina fialam-boly ary soavaly miasa an-tsoavaly.
Mazava ho azy, tsy afaka tsy hita izy ireo ny soavaly amerikana avaratra: Ny mustang na mustangs. Ity karazana Equine ity dia heverina ho iray amin'ireo tsara tarehy indrindra eto an-tany. Ao amin'ny sosona misy azy ireo dia afaka manolotra loko isan-karazany izy ireo, na izany aza sianao palitao indrindra toetra dia ilay Izy io dia mampifangaro ny feo volontsôkôla amin'ny feo manga, izay manome famirapiratana tsy manam-paharoa amin'ilay biby. Ity palitao ity dia iray amin'ireo toetra mampiavaka indrindra ireo soavaly ireo.
Tena ankasitrahana izy ireo noho ny fanoherana sy ny tanjany lehibe, izy ireo dia santionany kely volo izay manana haavo izay eo anelanelan'ny 135 sm sy 155 cm. ny toetra maloto sy mahaleo tena tanteraka mampiavaka ny soavaly masiaka izy io.
Raha ny marina dia nanomboka ireo equines ireo soavaly boribory, biby nifanaraka tamin'ny bibidia, rehefa nandositra na navotsotra noho ny antony. Ny lemaka amerikana midadasika sy ny tsy fisian'ireo mpihaza voajanahary dia nanampy tamin'ny fanitarana azy haingana. Tandindomin-doza ho faty izy ireo ankehitriny.
Ny soavaly Nokota dia a karazana marobe sy semi-maroon dia mitovy izay niainga avy any amin'ny faritra ratsy amin'ny Teodoro Roosevelt National Park.
Ny mampiavaka an'io karazany io dia izy irery ihany volom-boasary manga dia tena fahita, ankoatry ny mainty sy volondavenona. Amin'ny tsipika fiterahana sasany, ny marika manarona toy ny volom-borona fotsy dia hita ihany koa amin'ny tarehy sy ny tendrony.
Ny fitoviana voalohany amin'ity karazany ity dia ny omby dia izay nanjary nitokana rehefa nifindra avy tany Dakota izy ireo.
Izy io dia karazany misy a fahaiza-miaina tsara amin'ny toe-javatra ratsy, mailaka sy manan-tsaina, endri-javatra izay nanampy azy ho velona. Satria hazakazaka noezahan'izy ireo nesorina.
Soavaly Nokota anio mipetraka ao amin'ny Teodoro Roosevelt National Park, miaina miaraka amin'ny soavaly fiompiana ninia nampidirina tao amin'ny valan-javaboary, ary amin'ny tambajotram-pambolena sy fiompiana eo am-pelatanan'ny Nokota Horse Conservancy (NHC). Ny tanjon'ny NHC dia ny hitahiry ny mponina tany Nokota tany am-boalohany ary hanohana ireo soavaly razamben'i Nokota ireo.
Teraka tamin'ny "Soavaly karana" satria ny Indiana Comanche, ary ny Redskins no nisafidy ny fampiasana an'ireto specimens ireto ho an'ny hatsaran-tarehiny sy ny lokony, ny fahaizany ary ny fanoherana lehibe.
Tamin'ny taona 1800, ny lemaka atsinanan'i Etazonia dia nonenan'i soavaly soavaly pinto, que izy ireo dia nanjary loharanon'ny equines ho an'ny Indiana Amerikanina. Ireo karana amerikana ireo no nanomboka tamin'ny fiompiana an'io karazany io izy ireo, mitady ny toetra mampidi-doza indrindra sy tsara indrindra hiampitana amin'ny soavaly espaniola.
Ny vokany dia soavaly matevina, miaraka amin'ny hozatra voafaritra tsara, miavaka amin'ny fananana loha kely sy fisaka, tendany lava ary somary fohy sy tena matanjaka tongotra. Soavaly izy ireo mahery sy fanoherana lehibe.
Androany, maro amin'ireo soavaly ireo no nohatsaraina amin'ny alàlan'ny fiampitana azy ireo miaraka amin'ny karazany Quarter-Mile, hanamafisana kokoa ny fahaizany ara-batana amin'ny resaka hafainganana sy fiaretana.
Ny Arzantina Polo Horse dia karazany Equine novolavolaina tany Arzantina ho an'ny fampiharana Polo. Ny anglisy dia nampiditra polo an'i Arzantina tamin'ny 1890 tamin'ny fanafarana soavaly nilalao ny fanatanjahantena. Tsy ela dia nankafizin'ny Arzantina ity lalao ity. Tamin'ny taona 1920, mpilalao malaza maro no nanomboka tsy nampiasa afa-tsy soavaly kreôla ho an'io tanjona io. Ny Polo Arzantina, Izy io dia teraka avy tamin'ny fiampitana soavaly Pura Sangre de Carrera miaraka amina soavaly ambanivohitra.
Mampiavaka azy ny soavaly Polo Horse fanoherana lehibe sy hafainganana, na ho an'ny génétika sy ho an'ny fampiofanana azony. Ny soavaly polo dia ampiofanina mandritra ny taona maro alohan'ny hahatongavany amin'ny kalitao ilaina hilalao.
Ny maha-zava-dehibe ny fiompiana an'io karazany io dia miankina amin'ny hakingany sy ny fahaizany mandahatra, mamela ny lafiny hatsaran-tarehy ho lavitra kokoa. Izy ireo dia santionany amin'ny vatana mahia, tendany lava ary rantsam-batana matanjaka tsara ho an'ny fampandrosoana ity fanatanjahantena ity.
Soavaly an-tendrombohitra be vato
ny "Rocky Mountain", hoy ny anarany, dia tamin'ny fototra an'ny Rocky Mountains any Etazonia. nisy manodidina ny taonjato faha-XNUMX, rehefa nisy tanora mpitaingina jaza niseho tany amin'ny tany atsinanan'i Ketucky, dia io no ohatra izay hanomboka hantsoina hoe "soavaly ny Rocky Mountains." ary ilay ho tonga rain'ity karazany ity ankasitrahana be dia be any Eropa sy Amerika Avaratra.
Tsy misy fisalasalana, iray amin'ireo nisongadina an'ny Rocky Mountain dia ny volony. Tahaka ny mustang, izy ireo dia miavaka amin'ny iray manokana izay solontenan'ny karazany, na dia azon'izy ireo atao aza ny manarona ny loko matevina amin'ny palitaony. Ity volom-borona mahavariana sy tsara tarehy resahanay ity dia vita Ny alokaloka sôkôla amin'ny vatana, ny volom-bolo ary ny rambony miloko miaraka amin'ny volafotsy.
Antony iray hafa mahatonga an'io karazany io fantatra na miavaka, ankoatry ny toetrany tsara, dia noho ny fahafinaretany amin'ny orinasa olombelona, ​​raha oharina amin'ny alika.
Ilay zana-kazo amerikana na amerikana, antsoina koa hoe lasely amerikana na amerikanina, dia karazana soavaly izay niainga tany Etazonia. Izany dia fantatra amin'ny hoe soavaly fitondra fampisehoana tsara. Misy sokajy roa amin'ny fampirantiana: ireo izay misy dingana telo (tongotra, trot ary canter) ary ireo misy dingana dimy, izay ankoatry ny dingana an-tongotra mahazatra tafiditra ao amin'ny sokajy teo aloha, dia tsy maintsy ampidirintsika ilay valizy sy ilay dingana miadana.
Miaraka amin'ny haavony eo anelanelan'ny 150 cm sy 160 cm, ity karazany ity dia noforonina tamin'ny fiampitana an'i Thoroughbreds, Standardbreds ary Morgans miaraka amin'ny mares eo an-toerana nanana dingana tsotra izy ireo. Manana alokaloka ao anaty palitao izay tsy mitovy amin'ny mainty, bay, volontany, volontany na volondavenona.
Ny karazany Arzantina Silla, nanomboka niditra tao amin'ny rejisitra Silla Argentino nanomboka tamin'ny 1941, satria misy homogeneity lehibe ao amin'ireo santionany nipoitra avy amin'ny andiam-biby voafantina, miaraka amin'izay nanomboka hazakazaka voafaritra.
Avy amin'ity karazany ity dia azontsika atao ny manasongadina ny toetrany mavitrika sy velona, ​​tena mety amin'ny fanatanjahan-tena ary koa ny morphology-ny. Izy io dia manana rafitra matanjaka sy mifandanja, amin'ny antonony sy ny lanjany. Ny palitaon'izy ireo dia malefaka sy marevaka indrindra dia mety ho chestnut, chestnut na tordillo.
Ilay Soavaly Mandeha Tennessee, fantatra koa amin'ny hoe Tennessee Paso Horse, Karazan-tsoavaly nipoitra tany amin'ny faritra atsimon'i Etazonia izy io.
Ity karazana soavaly ity dia eken'ny besinimaro fa mety amin'ny karazana asa rehetra, avy amin'ny fisarihana ny angadinomby, ho fitaovana fitaterana. Matetika dia karazan'olona itondran'ny tantsaha azy io.
Iray amin'ireo fahaiza-manao lehibe an'ny Tennessee Walking, io no anjaranao. Ny fihodinan'ny biby dia ataon'ny kiho. Fihetsiketsehana mifangaro sy gadona izy ireo manome ny mpitaingina fampiononana lehibe indrindra azo atao ary mamindra hetsika kely dia kely aminy.
Ireo mpandeha an-tongotra Narragansett ao amin'ny fanjakan'ny Rhode Island, any avaratra atsinanan'ny Etazonia, ary soavaly kanadiana no razamben'ity karazany ity. Ho an'ny famoronana Tennessee Walking, voafantina ireo ekipa miasa amin'ny toeram-pambolena. Nanana ny mampiavaka azy ireo ny mivezivezy mora foana na dia any an-tendrombohitra aza, toetra izay holovain'ny taranany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » ny hafa » Karazan-tsoavaly » Soavaly amerikanina: karazana lehibe indrindra
Paul coudenys dia hoy izy:
vitsy ny karazany amerikana kely tsy ampy, toy ny soavaly Azteca (Mexico) ny Mangalarga Marchador (Brezila), Campolina (Brezila), Pantaneiro (Brezila), ny Kôlôlianina kreôla, sns.
Valiny tamin'i Paul Coudenys